Abaxhasi bethu-UkuBala ukuBuyela eBukumkanini
Thatha i-Virtual Returnback noFr. UMichel Rodrigue
Ndwendwela iwebhusayithi kaChristine
UChristine Watkins, i-MTS, iLCSW, sisithethi esingumKatolika kunye nomlobi odumileyo, ohlala eCalifornia nomyeni wakhe noonyana abathathu. Owayesakuba engakholelwa kubukhoboka bobuchasi-kristu owayephila ubomi besono, waqala ngobomi benkonzo kwiCawa yamaKatolika emva kokuphiliswa ngokungummangaliso kukaYesu ngoMariya, eyamsindisa ekufeni. Phambi kokuba aguquke, wayedanisa ngokusesikweni nakwiNkampani yeSan Francisco Ballet. Namhlanje, uneminyaka engama-XNUMX yamava njengesithethi sama Katolika, inkokeli yenkonzo ebuyayo kunye neparish, umlawuli wokomoya, kunye nomcebisi, iminyaka elishumi njengomcebisi wentlungu yabagadi kunye neshumi njengomlawuli wokuphilisa emva kokukhipha isisu. Wat Wat wafumana isidanga sakhe se-Masters kwiNtlalontle yeNtlalontle esuka kwiDyunivesithi yaseCalifornia eBerkeley, kunye neeMasters zakhe kwiTekhnoloji yeTekhnoloji evela kwiSikolo seTheology sikaJesuit eBerkeley. Watks uququzelela umboniso "Fumana okungakumbi, Fumanisa iNdlela yakho," kwiRadio Maria, wenza imiboniso bhanyabhanya kwiShalom World Television. Ungu-CEO kunye nomsunguli we www.LudwePeaceMedia.com kunye nombhali weAmazon # 1 abathengisi abaphambili: ZAMADODA NAMARIYA; Indlela Amadoda amathandathu aphumeleleyo edabini elikhulu loBomi babo, ITHUNYELWE: Ukubaleka kukaPatricia Sandoval kwiZiyobisi, ukungabi namakhaya, kunye neMinyango yangasemva yoBuzali obuCwangcisiweyo, nakwiSpanish phantsi kwesihloko, ITRansFIGURADA, EFUMANEKILEYO YOBUGCISA: Amabali angummangaliso wokuphilisa nokuguqula ngokuThembela kukaMariya, UKUQINISEKISA NGOKUGQIBELA UMARIYA: Ukubuyela kwakhona ngokomoya kuNcedo lwezulu ehamba kunye nale nto UKUQINISEKISA NGOKUGQIBELA KWE-MARY, yaye ISILUMKISO: Ubungqina kunye neziprofetho zoMqondiso weSazela. Yabona IChristineWatkins.com, kunye nolwazi oluthe kratya kwiincwadi zikaChristine ezingezantsi, Cofa apha.
Ndwendwela iwebhusayithi kaMark
UMark Mallett ngumfundi-ongumKatolika kunye nentatheli yeli bhaso. Ngo-1993, wamenyelwa kwinkonzo yamaBhaptizi ngumhlobo wabo osenyongweni, umKatolika osileyo. Ukufika kukaMark nenkosikazi yakhe uLee, babakhwankqiswa kwangoko bonke abatsha izibini kunye nobubele bazo. Enkonzweni, umculo wawumnandi kwaye ucocekile; intshumayelo, ethanjisiweyo, efanelekileyo, kwaye engene nzulu kwiLizwi likaThixo. Emva kwenkonzo, baphinda babuzwa zizibini ezininzi. “Sifuna ukumema kwisifundo sethu seBhayibhile kusasa ngomso… ngolwesibini, sinezibini ebusuku… ngolwesiThathu, sinomdlalo webhasikithi wosapho kwindawo yokuzivocavoca… NgoLwesine yindumiso yethu kunye nonqulo ngokuhlwa… ngolwesihlanu ngolwesi… . " Njengoko wayephulaphule, uMarko waqonda ukuba oku kuyinyani bekunjalo Uluntu lobuKristu, hayi ngegama nje-hayi ngeyure enye ngeCawa.
Emva kokubuyela kwabo emotweni, uMark wayehlala apho ethe cwaka. "Siyayifuna le nto," watsho kumkakhe. "Into yokuqala eyenziwa liCawe yokuqala yayiyindawo yoluntu kodwa ipherishi yethu iyiyo nantoni na. Kwaye ewe, sinomthendeleko ... kodwa asingoMoya nje kuphela kodwa zentlalo izidalwa. Sifuna nomzimba kaKristu ekuhlaleni! Ngapha koko, akazange atsho uYesu, 'Baphi na ababini okanye abathathu bahlanganisene eGameni lam, ndikhona mna phakathi kwabo? Kwaye 'Niya kwazi njani ke ukuba abafundi bam, ukuba nithe nathandana? Uhlawulwe ziintlungu ezinzulu kunye nokudideka, uMark wongeze wathi: "Mhlawumbi kufanele siqale ukuza apha ... siye eMass ngolunye usuku."
Ngobo busuku xa wayexubha amazinyo, ehlola ngengqondo yakhe ngeziganeko zangosuku, uMark ngequbuliso weva ilizwi elikhethekileyo entliziyweni yakhe:
Hlala, kwaye ukhanye kubazalwana bakho…
Wema, wajonga, wamamela. Ilizwi liphindaphinda:
Kwiiveki ezimbini emva koko, uMark wayehleli kwisitulo esibukele IKhaya laseRoma elimnandi—Ubungqina buka Gqirha Scott Hahn malunga nendlela awazimisela ngayo ukutshabalalisa imfundiso yama Katolika ... kodwa egqiba ekubeni ngumKatolika. Ukuphela kwevidiyo, iinyembezi zazehlela ebusweni bukaMark kwaye wayesazi ukuba, naye, ekhaya. Kwisithuba seminyaka eliqela elandelayo, uMark wazibethelela kwi-apologetics yamaKatolika, ethandana kwakhona noMtshakazi ka-Kristu, ngelixa ethobela elinye igama eliza emva konyaka: "Umculo ngumnyango wokwenza ivangeli." Emva koko yaqala inkonzo kaMarko yomculo.
Ngexesha loSuku loLutsha lweHlabathi eToronto, eCanada ngonyaka ka-2002, apho wayecula khona uMark, uPopu St John Paul II wabizela ulutsha kwinkonzo yesiprofetho:
Lutsha olutsha, kuxhomekeke kuwe ukuba ngu abalindi kwangesasa ndibhengeza ngokuza kwelanga ngubani uKrestu ovusiweyo! —UAPOPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBawo Oyingcwele kuLutsha lweHlabathiI-XVII yoSuku loLutsha lweHlabathi, n. 3; (cf. ngaba 21: 11-12)
Phantse iminyaka emine kamva, uMarko wayenolangazelelo olunzulu lokuthandaza phambi kweSakramente elisikelelekileyo. Apho, wayenamava amakhulu apho iNkosi yammema ngokobuqu ukuba athathe lo mnxeba ukuze abe "ngumlindi" (jonga Ibizelwe eludongeni). Phantsi kwesandla somlawuli wokomoya, uMarko wabhala UKUQINISA NGOKUGQIBELA wazisa ngebhlog yakhe, ILizwi ngoku, eqhubeka nanamhlanje ukuba "ibe kukukhanya" ezintlangeni kula maxesha obumnyama. UMark ukwangu-a umbhali wengoma kunye albhamu asixhenxe igama lakhe, kunye nomrhumo weSt. John Paul II,Ingoma yeKarol. " UMark nenkosikazi yakhe banabantwana abasibhozo kwaye bahlala eCanada. Bona uphawu uphawu.com.
Abaselula bazibonakalise ukuba basebenzela i-Roma kunye neCawe isipho esikhethekileyo soMoya kaThixo ... andizange ndibathandabuze ukubacela ukuba bakhethe ngokholo kunye nobomi kwaye babanike umsebenzi onqabileyo: ukuba babe "kusasa abalindi ”ekuqaleni kwenkulungwane entsha. —IIPOPE ST. UYOHANE PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9
(nge UNihil Obstat)
Uzalelwe eLondon kodwa uhlala eFrance ukusukela ngo-1994, uPeter Bannister ngumphandi kwindawo yesayensi kunye nenkolo, imvumi eqeqeshiweyo, ebandakanya isikhundla sakhe njengelungu leTaizé, kunye nomyeni notata. Uphethe izidanga zemasters kwiDyunivesithi yaseCambridge (umculo wezomculo) kunye neDyunivesithi yaseWales (iTheology neNkqubo yezefilosofi) kwaye uye wafumana amabhaso aliqela kuzwelonke nakwamanye amazwe ngomculo kunye nokwenziwa. Kwiminyaka eliqela, wayelilungu leqela lophando leSayensi kunye neNkolo yeSebe leYunivesithi yaseLyon kunye nomhleli weziko lezemfundo lesiFrentshi, www.sciencesetreligions.com, exhaswa ngemali yiTempleton World Charity Foundation. Umsebenzi wakhe wobufundisi kwezakwalizwi, ifilosofi, kunye nomculo upapashwe yiCambridge University Press, Ashgate kunye neRoutledge; ngumbhali we AKUKHO NABO MNQOPHISO WAKHO: UPopu uFrancis kunye nabaDeli bakhe abaNgcwalisiweyo.
Ndwendwela iwebhusayithi kaDaniel
UDaniel O'Connor ngunjingalwazi wefilosofi nenkolo kwiKholeji yoRhulumente waseYunivesithi yaseNew York (SUNY). Ekuqaleni injineli, UDaniel watshintsha amakhondo emisebenzi kwaye waqhubekeka wafumana isidanga se-Master kwiTheology esuka kwiKholeji yabaPostile eNgcwele kunye neSeminari eCromwell, kwi-CT, kwaye ngoku ungumfundi ogqirha, esebenza kwi-PhD yakhe kwiPhilosophy. Ngelixa uDaniel engowokuqala kwaye ephambili ebuKatolike, uziva njengothunyelwe kuye ebomini ukuba akhuthaze izambulo ezithile zabucala: ngakumbi i-Divine Nceba njengoko ityhilwe nguYesu kuSt. Faustina Kowalska, kunye nentando kaThixo njengoko kutyhilwe nguYesu kuMkhonzi kaThixo, Luisa Piccarreta. UDaniel uhlala eNew York nenkosikazi yakhe nabantwana abane. Indawo yakhe yewebhu inokufumaneka apha DDSDOConnor.com. Nguye umbhali ISIQINISEKISO SOKUGCINWA: KwiZityhilelo zikaYesu eziya eLuisa Piccarreta kwaye UMNQOPHISO WEMBALI YAKHE: IXesha Eliqaqambileyo loXolo lweHlabathi.
Imigaqo kunye neMigaqo-nkqubo kunye neMgaqo-nkqubo wabucala
Uyilo lwewebhusayithi ngu NgUkuYiza © 2022
A IndawoOrigin umxholo